မာနေး နဲ့ စတားလင်း ဘယ်သူ ပိုကောင်းသလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမားဟောင်း ရေးပါလာ - SPORTS MYANMAR
မာနေး နဲ့ စတားလင်း ဘယ်သူ ပိုကောင်းသလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမားဟောင်း ရေးပါလာ
အာဆင်နယ် ဂန္တဝင် ရေးပါလာ က မန်ချက်စတာ စီးတီး စတား ရာဟင် စတားလင်းဟာ ပြိုင်ဘက် လီဗာပူး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဆာဒီယိုမာနေး ထက် လုံးဝကို သေချာပေါက် ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုသွား ခဲ့ပါတယ်။ စတာလင်း နဲ့ မာနေး တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီက ၎င်းတို့ရဲ့ သွင်းဂိုး အများဆုံး ရာသီ ကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ ၂၅ ဂိုး ၂၆ ဂိုး အသီးသီး သွင်းယူ ပေးခဲ့ကြ ပါတယ်။
အင်္ဂလန် တိုက်စစ် ကစားသမားဟာ အင်္ဂါနေ့ အတ္တလန်တာကို ၅ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် မှာ ခြေစွမ်းပြကာ ဟက်ထရစ် သွင်းယူ ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ ၎င်းရဲ့ ၁၂ ဂိုးမြောက် ကို သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ကာ မာနေး ကလည်း မနေ့ညက ဂန့်ကို အဝေးကွင်းမှာ ၄ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင် ရခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ဂိုးသွင်း နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ ၎င်းရဲ့ ၉ ဂိုးမြောက် သွင်းဂိုးကို ရခဲ့ ပါတယ်။
စတားလင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက မန်စီးတီး နဲ့ အတူ အင်္ဂလန် ပြည်တွင်း ဖလား ၃ လုံး စလုံး သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပြီး မာနေး ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ရွှေဖိနပ်ဆု တို့ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေ အရ သိပ်မကွာ ခဲ့ပေမယ့်လည်း ပါလာ ကတော့ လီဗာပူး ကစားသမားဟောင်း စတာလင်း ကို မာနေး ထက် ပိုကြိုက် နေခဲ့ ပါတယ်။
ပါလာက စတာလင်းဟာ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ လက်အောက် မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်း မှာ ဆက်လက် တိုးတက် နိုင်အုံးမယ်လို့ ထောက်ခံ ခဲ့ပါတယ်။
ပါလာ က “စတာလင်းဟာ အသက် ၂၄ နှစ်သာ ရှိသေး တာကို ကျွန်တော် မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်နေ ပါတ်ယ။ သူဟာ လူငယ် ကစားသမား တစ်ဦးပဲ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ အသက် ၂၇ ၂၈ မှာ ဘယ်လို ဖြစ်လာ မလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် တွေးခဲ့ ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကောင်းမွန် နေခဲ့ ပါတယ်။ သူရဲ့ ခြေစွမ်းဟာ နှစ်တွေ အများကြီး ကစားထား ခဲ့တဲ့ ၀ါရင့် ကစားသမား တစ်ဦးလို ကျွန်တော် ထင်နေမိ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အသက် ၂၄ နှစ်ပဲ ရှိနေ ပါသေးတယ်။
သူ့ကို ဒီအချိန်မှာ ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒို နဲ့ လီယွန်မယ် မက်ဆီ တို့ရဲ့နောက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တတိယ ကစားသမား နေရာမှာ ထားသွား မှာလား? နောက်တစ်မျိုး ဆိုရင်ကော – မာနေးဟာ ဒီနှစ်မှာ လီဗာပူး အတွက် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင် ထားခဲ့ ပါတ်ယ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား အနေနဲ့ မာနေး နဲ့ စတားလင်း ဘယ်သူ့ကို ကိုယ့်အသင်းမှာ ရှိစေ ချင်သလဲ?
ဒါဟာ ရွေးချယ်ရ ခက်ပါတယ်။ မာနေး ဟာ အရမ်း ကောင်းခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ စတာလင်း ကိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘက်မှာ သေချာပေါက် ရှိစေ ချင်ပါတယ်။ သူဟာ ဒီထက် ပိုကောင်း နိုင်တယ် ဆိုတာကို ပက်ဂွာဒီယိုလာ သိပါတယ်။ သူ ဒီထက် တိုုးတက် လာနိုင် ပါသေးတယ်။ မန်စီးတီး အသင်းမှာ ထိပ်တန်း ကစားသမားတွေ ရှိနေပြီး သူတို့ဟာ ဒီအချိန်မှာ အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေး ကို ရနေတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက် သွားဖို့ အတွက် ဒီလို အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း နိုု်င်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စတာလင်းဟာ ဒီထက် ပိုကောင်း နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ သူဟာ ဂိုးတွေ ဒီထက် အများကြီး သွင်းယူ နိုင်သလို နေရာယူ ပုံတွေ ပိုကောင်း လာနိုင်ပြီး ဖန်တီးမှုတွေလည်း ဒီထက် အများကြီး လုပ်နိုင် ပါသေးတယ်။ သူဟာ တစ်ပွဲတည်းမှာ ၄ ဂိုး သွင်းယူ နိုင်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူဟာ နေရာကောင်းတွေ အများကြီး ကို ၀င်ရောက် နေပြီး သူ့ရဲ့ အဆုံးသတ် တွေဟာ ပိုကောင်း လာအုံး မှာပါ။ သူ ဘယ်လောက် သွားချင် သလဲ ဆိုတာ သူနဲ့ပဲ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ သူဟာ တစ်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။